Fifandraisana - +48 583331000, mailaka: biuro@e-centrum.eu
Teboka sy fampahalalana an-tserasera sy nasionaly
Ny sonian'ny elektronika dia ahafahan'ny mpanjifa manao sonia antontan-taratasy mora foana sy mahomby na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny fitaovana hafa. Anjaranao ny manao azy ho haingana sy mety kokoa.
Ary ny ampahany tsara indrindra dia ny Signature Electronic Qualified dia ahitana: rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny sonia sy manamarina ny e-dokumen / rakitra. Jereo ny sarimihetsika Download ny fandaharana
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny fizotry ny fanamarinana ho an'ny tsenan'ny orinasa, ary misy ny fanamafisana manokana momba ny serivisy fitantanana ireo any ivelany. Manao fanamarinana any amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao izahay, tsy mila olona liana mitsidika an'i Polonina
INFOLINE REHETRA REHETRA
Ny antsipiriany momba ny fifandraisan'ny firenena iray dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fandefasana ny totozy mandritra ny kaontinanta safidinao. Sarintany eto ambany.
AFRIKA AZIA EUROPE AVARATRAAMERIKA OSEANIA ATSIMOAMERIKA
Hita amin'ny fiteny maro ity fampahalalana ity. Misafidiana kinova fiteny hafa azafady.
Fomba ahazoana sonia elektronika:
1. Ampidino ny fanontaniana momba ny famandrihana ifanakalozana / All of Poland
CLICK - Fenoy ny Application
Ampidino ny fanontaniana momba ny famandrihana ifanakalozana ho an'ny vahiny
2. Fenoy ny rindranasa amin'ny solosaina na amin'ny fitaovana finday dia mifanakalo amin'ny farany "andefaso" ny rindranasa vita dia miverina aminay avy amin'ny masinina
3. Rehefa afaka adiny 24 aorian'ny nahazoana ny fanontanianao feno dia hifandray aminao amin'ny telefaona na mailaka izahay hamaritana ny antsipirian'ny baiko
4. Hanao sonia fifanarahana izahay ary hametraka ny taratasy fanamarinana
Tolotra atolotray ho an'ny mpanao asa soa:
FIVORIANA VAOVAO TSY MISY TOKONY HIFAMPIANA - MOMBA NY FIVORIANA MISY KOKOA FAMPISEHOANA AN-TRANO CERTUM.
Mandahatra fotsiny - dia hahazo ianao fa tsy handao ny tranonao ary tsy mila fanamafisana ny mombamomba anao Ny fanamarinana tsotra.
Antsoy na soraty raha te hahalala bebe kokoa momba izay azon'ny sonia elektronika ho anao
tel. + 48 583331100
Ny tolotra dia natokana ho an'ny mpanjifa izay manana taratasy fanamarinana manan-kery amin'ny karatra kriptografika.
Azafady mandamina mialoha ny fotoana anendrena anao amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka amin'ny 583331000 na biuro@e-centrum.eu